Fanehoana ny herin'ny Filazantsara | FJKM Amboniloha
Fanehoana ny herin’ny Filazantsara
Mofon’aina 20 Septambra 2014
Apostolin’ny Jentilisa ary Mpitory ny Filazantsara tamin’izy ireo ny Apostoly Paoly. Mijoro ho vavolombelona ny amin’ ny herin’ny Filazantsara izy teo am-panatanterahana ny asany. Asehony indrindra eto fa ny herin’ny Filazantsara dia :
Fampiombonana ny olona ao amin’ i Kristy : (and.6)
Noho ny amin’ ny herin’ny filazantsara notorian’i Paoly dia sahy milaza izy fa ny Jentilisa dia tonga mpiray lova ao amin’ i Kristy. Tratrany ny tanjona fa nandresy ny fizarazarana sy ny fitsitokotokoana. Noho ny amin’ i Kristy dia foana ny fahasamihafana. Tanjon’ Andriamanitra, indrindra ho antsika Kristiana ny fiombonana sy fifankatiavana. Noho ny fahalementsika tsy mahay miaina amin’ireo no naneken’i Kristy hitondra fampihavanana teo amin’ny hazo fijaliana.
Fampanekena ny maha mpanompon’i Kristy : (and.7)
Natao ho mpanompon’ny Filazantsara araka ny fanomezan’ ny fahasoavan’Andriamanitra sy araka ny fiasan’ny heriny i Paoly. Isika rehetra izay mino an’i Kristy sy mankato Azy koa dia atao ho mpanompon’ny Filazantsara amin’ ny fahasoavana sy ny herin’ Andriamanitra tahaka azy. Nomen’Andriamanitra antsika ny fahasoavana rehetra ilaina amin’ ny fanompoana Azy. Izany indrindra no tokony hanontaniantsika tena manao hoe : mpanompon’iza moa aho ? Hatraiza ny fanompoako an’i Kristy sy ny Filazantsarany ? Lany hanompoako an’iza ny androko ?
Tsy eo amin’ ny fiainam-panompoana ihany, fa eo amin’ ny andavanandrontsika koa, tanisao ny fomba nanehoan’ Andriamanitra ny fahasoavany taminao ?